Repoblika Tseky, Andian-Taranaka Vaovao Manohy ny Tolona Fanoherana ny Arintany · Global Voices teny Malagasy
Repoblika Tseky, Andian-Taranaka Vaovao Manohy ny Tolona Fanoherana ny Arintany
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Italiano, English
Ny hetsika “Limit jsme my” hanakatonana ilay toerana fitrandrahana lignite (karazana arintany) tao Bílina tamin'ny 2017. Sary: Ondřej Bratoň / Limity jsme my
Ity lahatsoratra ity dia famerenana ny lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny 350.org, ao anatin'ny fiarahana miasa amin'ny Global Voices. Nosoratan'i Radek Kubala, Josef Patočka ary Antonie Bernardová avy amin'ny “Limity jsme my”, fiarahamientana tseky ho an'ny toetrandro ..
Tokony ho toerana iray tena mahafinaritra sy tsara ivelomana i Libkovice. Mitomandavana manaraka ny moron'ilay renirano eo ampototr'ilay tendrombohitra mahasondriana misy metaly manasaraka ny Bohemia Tseky amin'ny Saxe alemàna, mponina anjatony maro no hita ao amin'ilay vohitra. Ananany ny mpanao mofo, hotelin'ambanivohitra mampiavaka azy manokana, ary fanahy iray matanjaka tena mandàla ny firaisa-monina, raha ny voalaza.
Indrisy, tsy misy intsony i Libkovice. Toy ny nanjo ireo tanàna sy vohitra hafa ampolony tao anatin'ilay lemak'i Bohemà Avaratra no nahazo azy, rava mba hanomezana toerana ireo toerana goavana fitrandrahana arintany mitafo lanitra.
Ry zareo tao Libkovice no olona niala farany indrindra. Tamin'ny 1992 sy 1993 ilay tanàna no fongana na teo aza ny fanoherana mafy nataon'ireo mponina tao aminy sy ny hetsika vao teraka hiarovana ny tontolo iainana. Antso iray fanairana mba hijerena ny tena zavamisy hoe tsy hahatonga ny zavatra rehetra ho lafatra akory ireo fepetra demaokratika vaovao. Izy ireo sy ny tanàna keliny dia hitoetra ho maripamantarana ny fahapotehana ateraky ny indostria fitrandrahana arintany amin'ny tontolo iainana sy ny olona.
Faharavàna naterak'ireo toerana fitrandrahana mitafo lanitra tao amin'ny Repoblika Tseky. Sary: Majda Slámová/ Limity jsme my
Ankehitriny, minitra vitsy monja raha mandeha an-tongotra miala avy eo amin'ny toerana nisy an'i Libkovice fahiny, misy andian-taranaka vaovao mpitaky ny rariny mikononkonona hetsika fanoherana ny arintany, ny “Klimakemp” izay efa eo amin'ny faharoa taonany. Noraisinay anaty kajikajy ny hoe na eo aza ny tantara mangirifiry, mbola iray amin'ireo hery matanjaka ao Eoropa amin'ny resaka arintany ny Repoblika Tseky (miaraka amin'i Alemaina sy Polonina).
Ao anatin'ny antsasak'ity taonjato ity, mbola fikasan'ny governemanta tseky ny hanohy hitrandraka sy handoro ity loharanon'angovo mitondra fahasimban'ny toetrandro ity. Efa ho ny antsasany mahery amin'ny herinaratra ampiasain'ny firenena no avy amin'ny arintany. Izay mahatonga ny Repoblika Tseky hijanona ho iray amin'ireo tena mpandefa entona CO2 ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeàna, raha refesina isambatan'olona, laharana fahefatra mitovy amin'i Pays-Bas. Na dia iray ihany koa amin'ireo mpanondrana herinaratra betsaka indrindra ao amin'ny tanibe aza izy, dia mbola tohizany ihany koa ny fampandehanana ireo toby ampolony mahery famokarana herinaratra efa antitra be tamin'ny taona 1970 sy 1980. Ny vokatra omen'ireo dia efa mila hitovy amin'ny habetsaky ny herinaratra aondrana isantaona.
Tamin'ny 2015, raha izao tontolo izao teo ampiomanana hiatrika ny fivoriambe momba ny toetrandro nokarakarain'ny Firenena Mikambana tany Parisy, ny governemanta tamin'izany fotoana izany kosa nanosoka hevitra ny handehanana lavidavitra kokoa ao anatin'ity fitroaran'ny loharanon'angovo azo avy amin-javatra lò ity ary nanala ireo ‘fetra’ tamin'ny fitrandrahana. Fetra napetraky ny governemanta demaokratika voalohany tany amin'ny taona 1990 mba hiarovana ny toerana fonenan'ireo vondrom-piarahamonina any amin'ireo faritra misy harena ankibon'ny tany. Ny fepetra tahaka izany dia tsy hoe fotsiny nitondra tamin'ny fandefasana entona CO2 bebe kokoa teny amin'ny habakabaka, fa koa nitondra tany amin'ny faharavàn'i Horní Jiřetín, vondrom-piarahamonina iray nahitana olona 2.000.
Araka izany, nipoaka nanerana ny firenena ireo hetsipanoherana notarihan'ny fiarahamientan'ireo mponina teny an-toerana, ireo ONG miaro tontolo iainana, ary ilay tetikasa vaovao be “Limity jsme my” (Izahay no fetra), izay nisy anay rahateo. Herinandro vitsivitsy monja talohan'ny nidirana tamin'ny fifanarahana momba ny toetrandro tao Parisy, nanapaka hevitra ny hanavotra an'i Horní Jiřetín tsy ho tratry ny fandravàna ny praiminisitra Bohuslav Sobotka sy ny governemantany, saingy hanitatra ilay toerana fitrandrahana mifanakaiky aminy ao Bílina ihany mba hamokatra arintany 150 tapitrisa taonina fanampiny. Voaelingelina ilay lanonana..
Limity jsme my – Izahay no fetra. Sary: Majda Slámová / Limity jsme my
Fandresena amin'ny ampahany izay sady nandrisika no nahatezitra, nanapaka hevitra izahay ny hanova ny hetsikay ho lasa sehatra iray mahartra ary hanangana hetska iray maharitra ihany koa. Ny lohataona 2016, notohananay ny tolona hanakanana ny famarotana amin'ny orinasa tseky EPH ny toerana fitrandrahana lignite tao amin'ny faritr'i Lausitz tao Alemaina Atsinanana.
Nikarakara iraka nalefa ho any amin'ilay toby momba ny toetrandro natsangan'ireo mponina tao an-toerana izahay, ary naka aingampanahy avy amin'ny fahombiazan'ireo hetsika Ende Gelände, ampahany amin'ny andiany Break Free (“Afaho ny tenanao”), fandàvana faobe ho an'ny toetrandro. Tamin'ny andro farany nanaovana fibahanana ireo lalamby, azo ambara ho niato tanteraka ny toby iray famokarana herinaratra, no sady re tamin'io ihany koa fa – nandritra ny ora maromaro – sambany teo amin'ny tantarany i Alemaina namokatra herinaratra avy amin'ny angovo azo havaozina fotsiny – fotoana iray tena ho maripamantarana.
Hetsiky ny Limit jsme my tamin'ny 2017. Sary: Majda Slámová / Limit jsme my
Rehefa tafody an-tanindrazana, nanomboka dingana iray izahay ho fanomanana taona iray hananganana ny Klimakemp voalohany teo amin'ny tantaran'ny Repoblika Tseky, izay nambaranay nandritra ny fankalazana ny faha-25 taona nametrahana ireo “fetra” amin'ny fitrandrahana. Voalazan'ny fanambarànay ny hoe : “Tsy ampy ireo fetra, tianay hifarana ny vanimpotoanan'ny arintany”. Navoitranay ireo loza entin'ny fiovàn'ny toetrandro, notakianay ny hanafoanana ny fanapahankevitra momba an'i Bílina ary ny hanakatonana ireo toby efa antitra be famokarana herinaratra, nanaovanay antso ny hisian'ny hetsika am-pilaminana ho fandàvana faobe mba hanoherana ireo tetikasan'ny governemanta.
Nirianay ny hameno ny asan'ireo goavana mpifanome tànana sy ireo ONG, ary hanavao ny politikan'ilay hetsika. Izany no antony nikarakarànay ny hetsika Klimakemp voalohany tamin'ny fomba tena marindrano tanteraka, miaraka amin'ny fisokafana amin'izay rehetra te-handray anjara.
Ilay toby izay ny ao anatiny ihany no manao izay hampiodina azy dia natao tamin'ny tapaky ny taona 2018 tao anatin'i Horní Jiřetín, ilay faripiadidiana manana ny toerany sy nahita fandresena. Nahangona olona 300 avy ao amin'ny faritra, avy amin'ny firenena manontolo sy i Eoropa manontolo, ary nampifanantona ireo andianà fikambanana misahana tontolo iainana sy ireo manohitra ny fanavakavahana ary ny “Zo hanana tanàna”. Tao anatin'ny dimy andro ilay toby dia nanome sehatra hiarahana miaina, hiarahana milanona ary hiarahana mihetsika.
Olona dimampolo amby zato no niaraka nibahana ilay fanitarana ny toerana fitrandrahana tao Bílina. Io hetsika mahery vaika nanaovana fandàvana faobe tsy misy herisetra io dia nanakana ny fanitarana ilay fitrandrahana arintany, ary nametraka ny resaka fiovàn'ny toetrandro sy ny fitakianay ho eny alohan'ny sehatra tamin'ny adihevitra.
Fanakatonan'ny Limity jsme my ny toerana fitrandrahana tao Bílina tamin'ny 2017. Sary: Petr Zewlák Vrabec / Limity jsme my
Nanome toky izahay fa hiverina – dia ireto izahay. Raha toa ka mihalalina ny olan'ny toetrandro, zavadehibe kosa ‘ny fampifandraisana ireo teboteboka’ manelanelana ireo tranga henjana momba ny toetrandro, sy ireo tolona eny an-toerana hanoherana ny sehatry ny loharanon'angovo azo avy amin-javatra lò, ireo politikam-panjakana sy ny famatsiambola iraisampirenena. Lavin'ireo olona ao Pardubice ny fanalavàna ny fepotoana hihodinan'ìlay toby famokarana herinaratra ao Chvaletice. Ireo ao amin'ny faritra Liberec indray mitolona hahazo ny ranon-dry zareo, izay trohan'ilay toerana fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ary ireo any avaratra mitolona manohitra ny fanohizana ny fitrandrahana arintany.
Tolona goavana no manoloana antsika. Ezahan'ireo orinasa mpamokatra angovo ny hiala amin'ireo toromarika vaovao napetraky ny eoropeàna (BREFs) ary ny governemanta tseky no nanome fahafahana azy ireo mba ho afaka mangataka fanalefahana (tsy hanaraka ireo toromarika ireo). Ato anatin'ny taona vitsivitsy, dia ho havaozina atao maoderina kokoa ireny fotodrafitrasa ireny, na ho akatona mifanaraka amin'ireo tetikadin'ny firenena momba ny resaka angovo.
Nifandona tamin'ny fanehoankevitry ny daholobe ny tsindry miharihary nataon'ireo orinasa tsy miankina mpitrandraka arintany, toy ny Severní Energetická na ny EPH mba hamadihana azy ireny ho an'ny tsy miankina ary ho atao maoderina kokoa. Hanana ny lanjany tokoa ireo taona ho avy, ary ny fifandraisana sy ny firaisankina iraisampirenena dia mety hitàna toerana lehibe tokoa ho fanakànana ireo banky manerantany tsy hanome fampindramamboka an'ireo orinasa raha toa ka tanteraka ny famindràna ny fitantanana ireny orinasa ireny ho lasan'ny tsy miankina.
Hamory olona avy amin'izao tontolo izao ny Klimakemp faharoa hatao ny 27 jona hatramin'ny 1 jolay, olona hankahàtra indray ny indostria mpamokatra loharanon'angovo azo avy amin-javatra lò. Manoloana an'ireo mpanapaka hevitra izay voageja foana ao anatin'ny boribory vetavetan'ny arintany sy ny nokleary, tena ilaina dia ilaina tokoa ny manangana hetsika matanjaka ho an'ny toetrandro iarahana amin'ny erantany.